Bullet V2, ekwe ekwe ekwe OnePlus ọhụrụ ị nwere ike ịzụta naanị 19.95 euro | Akụkọ akụrụngwa
Ternyaahụ bụ ụbọchị ahọpụtara site OnePlus iji mee ka eze gosipụta ngwaọrụ ọhụrụ yana dịka anyị niile tụrụ anya ya, onye nrụpụta China enyela anyị ụdị nke Bullets nke abụọ, e mere baptism Mgbo V2 na na ha abụghị ihe ọzọ karịa nnukwu ekweisi na-etu ọnụ maka ọtụtụ ihe, mana ọkachasị ọnụahịa ha.
Malite na imepụta ya, anyị na-ahụ obere ekweisi nwere arypha polyacralite diaphragm. Banyere aesthetics, na vidiyo nke na-achị isiokwu a, ị nwere ike ịhụ ngwaọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke na nso.
Ọ dịkwa mma ịtinye na OnePlus achọghị ịnwale nke ukwuu na njikọ isi okwu na anyị hụrụ a ọdịnala 3.5 mm njikọ. O yiri ka ndị na-emepụta China na-ahọrọ ịhapụ ihe ọhụụ ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Dị ka anyị kwurula, otu n'ime akụkụ kachasị mma nke OnePlus Bullets V2 bụ ọnụahịa ya nke edobere na euro 19.95, na nke ahụ maka àgwà ha kwesiri inye anyị, nke belata nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe Bullets V2 gị ugbu a, ịnwere ike ịme ya site na weebụsaịtị OnePlus, nke ị nwere ike ịnweta site na njikọ ọzọ.
Kedu ihe ị chere maka ihe ọhụrụ OnePlus Bulets V2 nke ndị China mepụtara ụnyaahụ?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Bullet V2, ekwe ekwe ekwe OnePlus ọhụrụ ị nwere ike ịzụta naanị euro 19.95